QC & Production Base - JL mitrandraka Co., Ltd
Plant voajanahary koa omen'ny for Feed Additive & Pet Sakafo
Plant voajanahary koa omen'ny for famonoana bibikely, Fungicide, Bactericide & Virucide
Legioma, Voankazo & Herbal Powder
1) Quality Control amin'ny fanazavana.
To abtain sakafo voajanahary, ny toetra tsara avy 70% tsara ara-nofo sy ny 30% fanodinana, ka isan-taona isika no manokana ampahany betsaka ezaka mba hahita ny loharano sy ny faritra ny manta famokarana fitaovana tsara kalitao, matihanina Manana personels mba hanangona fitaovana manta.
2) Quality Control amin'ny Warehouse
Tsara Storage condiction Tena zava-dehibe ny hijanona ny mavitrika ao amin'ny manta ilaina ara-nofo, ny trano fanatobiana entana tsy vitan'ny hoe tsy afaka manta fitaovana mba mando, maty fotsy, fa tsara koa ny fiarovana ny entana vita.
3) Quality Control amin'ny Facility
Ny Facility Tena zava-dehibe ny vokatra coefficient, vola bebe kokoa izahay tsara ny Hanavao ny trano ao amin'ny orinasa, ny toerana tsara dia afaka hampihena ny famokarana vola sy mampitombo ny fifaninanana.
4) Quality Control ny hanesorana Solvent
izahay nifantoka tamin'ny fototra exract ho Feed & Veterinary Zava-mahadomelina, ny FAMI-QS sy ny fangatahana Quality mangataka ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny ampiasaina hanesorana solvent sy solvent sisa. Ny metaly mavesatra sy methanl ambaratonga sisa dia miankina be dia be amin'ny hatsaran'ny nalaina ranoka mandevon-javatra, toy ny Hg (volavelona, quilksilver) in Macleaya cordata hanesorana dia avy amin'ny solvent ny sulfuric asidra, ny Methanol tao St. John 'Wort hanesorana dia avy amin'ny ethanol .Ny toetra tsara hanesorana solvent mety hampihena ny mety indrindra ny Heavy vy sy methanol haavon'ny.
Organic fambolena ihany koa ny fangatahana solvent (ethanol) Tsy sythentic, isika ihany no mampiasa ethanol avy amin'ny katsaka masirasira amin'ny GMO maimaim-poana.
5) Quality Control amin'ny fitrandrahana Procressing
Taorian'ny taona maro ny famokarana sy ny fikarohana eo amin'ny teknolojia, miovaova Manana fomba fanamboarana sy matotra mikoriana tabilao vokatra ho an'ny tsirairay izahay mitandrina ny toetra marin-toerana.
6) Quality Control amin'ny Anayslis
ny QC dia sample batch tsirairay na inona na inona izany na batch santionany habetsahana sy ny fahazarana manao fandalinana aorian'ny famokarana, raha ny fitehirizana mihoatra ny 1 volana, ny faharoa dia fanadihadiana hatao alohan'ny fanondranana. Ny fitsipika rehetra dia avy NIFDC (National Institues ho an'ny Sakafo sy ny Fanafody Control) na SIGMA.
7) Quality Control amin'ny lisitry ny fonosana.
Tsy mandany fonosana hafa fitaovana ho an'ny vokatra hafa amin'ny fepetra arahana samy hafa, mba hitandrina ny toetra mafy orina. Alum Bag, Vaccumm fonosana, Plastic Drum. Glass tavoahangy. ho an'ny rehetra ny baiko ara-barotra, dia hanao pallet fonosana hitandrina ny entana soa aman-tsara amin'ny fitaterana.
Address: D11, Beiyuan Villa, Biandian Street, 050061 Shijiazhuang, Hebei, Sina
Fa ny fanontaniana momba ny fanompoana sy ny Products, Masìna ianao, avelao ny mailaka ho antsika Izy ary ho mifandray ao anatin'ny 24 ora.